imbumba inikelele abahlwempu - Ilanga News
Home Izindaba imbumba inikelele abahlwempu
imbumba inikelele abahlwempu
IBIPHELEZELWA yizikhondlakhondla zezinhlangano ezifana nayo iMbumba Foundation, ezinze eRichards Bay, ngesikhathi ingena iphuma emizini eyahlukene ngaphansi kukaMasipala wasoPho-ngolo ngoLwesihlanu, kunikelelwa abahlwempu ngezidingongqangi njengoba kuvalwe izwe ngenxa yokusabalala kwe-coronavirus.
Ingaphezu kuka-1 500 imindeni ehlomule kulolu hlelo obekukhona kulona neMandela Foundation, iKolisi Foundation kaSiyamthanda “Siya” Kolisi, ongukaputeni weqembu lesizwe laseNingizimu Afrika, AmaBhokobhoko, umasipala wendawo obuholwa nguNkz Winile Nhlabathi oyimeya, nezinye izinhlaka zomphakathi.
Bekukhona noKaizer Motaung Junior oyindodana kaKaizer “Shintsha Guluva” Motaung ongumnikazi weKaizer Chiefs.
IMbumba Foundation inikelele imindeni ngokudla okungayigcina amasonto amathathu kuya kwamane, imisubelo yabesifazane nensi-pho yokugeza izandla njengokomyalelo womnyango wezempilo.
Ngokusho kukaMnu Richard Mabaso, oyisikhulu esiphezulu kwiMbumba, bahlonze le ndawo ngoba phambilini kuke kwavela ukuthi inokuhlaselwa kakhulu wububha.
“Lolu hlelo silwenza ngaphansi kwesiqubulo esithi: ‘Each One Feed One’. Ngaphezu kwalokho, sigqugquzela ukuba kungabikhona ukuyekelela abantu uma bexakekile, abantu mabasizane ngokudla.
“Umhlaba wonke ubhekene nesimo esinzima ngenxa yalolu bhubhane, siyanxusa nabanye abanamandla ukuba basukume babhukule kusizwe abantu.
“Thina saziwa kakhulu ngokuhambela izikole sinika abafundi imisubelo abayisebenzisa uma besezi-nsukwini zabo, kodwa kulokhu si-ngena emakhaya sibheke ukuthi yini ezosala ifakwa ebhodweni.
“Kuyintokozo nje nokuthi kulolu hlelo sibambisane nezinhlaka ezahlukene phakathi kwazo okukhona noMasipala wesiFunda iZululand nabanye abaholi ezingeni likahulumeni wakuleli nakomasipala,” kusho uMnu Mabaso.
Previous articleLuyinzukazikeyi olokuvulwa kwezikole
Next articleU-VVO USENQUME UKUZAKHELA IZIFONYO NEZIHLAMBI-ZANDLA